Ipstar အသုံးပြုရတာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းနိ&#414- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
UNDP Laputta IPstar ကအခုတလော ပြသနာအရမ်းတက်နေပါတယ်။ တနေကုန်မရသလို ညနေပိုင်းမှရတာလည်းရှိတယ်။ ထင်တာတော. ဘက်ထရီအားကြောင်.လို.ထင်တာပဲ၊ satellite မီးမလင်းတာ။ satellite link မတက်တာ။ ဘက်ထရီအသစ်တလုံး၀ယ်ပြီးတော. လည်း အဲလိုပဲ၊ ရန်ကုန်ကိုမေးရင်တော. ဟိုလိုလေးလုပ်လိုက်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်လို.ပြောတာပဲ။ MPT က ipstar page ကနေ satellite,DHCP ကိုစစ်ခိုင်းတယ် ဒါပေမဲ. သူတို.ရဲ. default password နဲ.၀င်တော.လည်းမရဘူး။ နောက်ဆုံးတော. ပိတ်ပြီး ၂၊၃ နာရီလောက်စောင်.ပြီးဖွင်.ရင်တော. ၃၀ မိနစ်လောက်တော.တက်တယ်။ အဲဒါ တခြားဘာပြသနာဖြစ်နိုင်လဲ? DC version ကနေ AC ကိုပြောင်းလိုက်ရင်အဲ.ဒီ.ပြသနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလို.တော. သိရတယ်။ ဟုတ်လားဟင်။ ပြောင်းရင်ဘယ်လောက်ကျပြီးဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ရန်ကုန်ကလုပ်ပေးနိုင်မလား?
Pookey wrote: »
UNDP Laputta IPstar ကအခုတလော ပြသနာအရမ်းတက်နေပါတယ်။ တနေကုန်မရသလို ညနေပိုင်းမှရတာလည်းရှိတယ်။ ထင်တာတော. ဘက်ထရီအားကြောင်.လို.ထင်တာပဲ၊ DC version ကနေ AC ကိုပြောင်းလိုက်ရင်အဲ.ဒီ.ပြသနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလို.တော. သိရတယ်။ ဟုတ်လားဟင်။
AC Type နဲ့ DC Type (၂) မျိုးရှိပါတယ် AC Type ကတော့ရှင်းပါတယ်
DC Type ဆိုရင် Battery အားနည်းရင် Connection ကအ၇မ်းနှေးတာကြုံဖူးတယ်ဗျ
Wireless-N Home Roruter (Cisco) , WRT 120 N ကို install လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီ Router ကို install လုပ်ပုံလုပ်နည်း အစမှ အဆုံးထိ သိချင်ပါတယ်။
I'd like to know over charge rate calculation system in IP star.
We've paid many US$ in some month for over charge. And how can i know our daily usage. In previous3or4years ago,we can see in Bagan website how much data amount we use each ip star detail, but it's not working well now.Please help urgently,
Can Use skynet
စကားမစပ် .. SKY NET ဆိုတာ IP-STAR နဲ့တူတူပဲလား? တူတယ်ဆိုရင် မေးချင်တာလေးတွေရှိလို့ပါ။ ^^
ipstar cgi ရိုက်ပြီးကြည့်တော့ ဘာတွေသနိုင်မလဲ
recive , trasmit ဘယ်လောက်ရရင်လိုင်းကောင်းလဲ
ipstart connection ရှိမရှိကို ဘယ်ip ကို ping ရမလဲ။
192.168.1.1 ကိုping တာreply မရပါ။ဒါပေမယ့် Internet သုံးလို့ရတယ်
IP star နဲ့ပတ်သက်လို့
I want to internet connection speed test software.
Ipstar 256 ko 512 lo chin lo bal lo loat ya ma lal ka myar:) help me
iUat software ဘယ်လို run လည်းဆိုတာ ebook လုပ်ပေးပါလား။ သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ........
comment တွေကို ဖတ်ကြည့်တာတော့ အရင်နှစ်တွေကပါ but i have to say abt MPT.Now i m working at NGO.IP Star setup finished on March.After installation IPStar with supplier Myanmar World, Data service could't use bcoz activation fees needed to pay MPT.So phone lines only we can use.Then2month after paid all fees, Toe Kyang Kalay's mpt person changed IP address for data service.အဲ့မှာ စတွေ့တာဘဲ ..Benlarden & chaw su khin :P
after changed IP address ,we can use data services.but can't use VOIP phones.So i contact MPT ,Toe kyaung& Supplier.They're all Volleyball men.:P .Toekyaung person said to contact 8 mile office, 8 mile office said to contact to Toekyaung, then Toekyaung said to contact Supplier,bcoz they sold ATA (not from MPT)
supplier sale manager said she bought from MPT ATA , not from others and she had voucher.We contact again
MPT Toekyaung, they can't tell satisfied reason.
Now i can handle all of IPstar error, Hack CB ,to shift more signal myself.
I noticed Albert Einstein Quote from friend's facebook page, so i share that.
“I am thankful to all those who said No..to help me
Thanked by 1 Thihakyawsoe
ကျ​နော်​က​နယ်​က​ပါ။​ ကျ​နော့်​အ​ကို​ တ​ယောက်​ ut ကို​ reset လုပ်​လိုက်​မိ​တာ​ အ​ထဲ​က​ setting တွေ​ပျောက်​ကုန်​လို့။​ skynet ကို​ပြော​တော့​ setting ပြန်​ထည့်​တာ​ကို​ပဲ​ ၁သိန်း​လောက်​ တောင်း​နေ​လို့​ပါ ။​ ( skynet mps ရဲ့​ xwebgateway.cgi မှာ​ ထည့်​ရ​မယ့်​ satellite setting လေး​ကို​ သိ​တဲ့​သူ​များ​ရှိ​ရင်​ပြော​ပြ​ပေး​ လို့​ရ​မ​လား​ခင်​ဗျ။​ ကူ​ညီ​ပေး​ကြ​ပါ​အုန်း။​ အ​ဓိ​က​ LNB frequency နဲ့​ RxFrequency လေး​တွေ​ကို​သိ​ရ​ရင်​ အ​ဆင်​ပြေ​ပြီ​လို့​ထင်​တာ​ပဲ။​ လုပ်​ကြ​ပါ​အုန်း​ ^:)^
ကျွန်တော့် ipStar Username & Password သိချင်ပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ